I-Adrafinil powder (63547-13-7) hplc =98% | Yenza i-Nootropics powder
/ iimveliso / I-Nootropics powder / Adrafinil powder
SKU: 63547-13-7. Udidi: I-Nootropics powder
I-AASraw inokusetyenziswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-Adrafinil powder (63547-13-7), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Adrafinil powder Inkampani eyenziwa yiFransi, iLafon, i-Adrafinil yayiyiziyobisi zokuzama ukunyanga izidlova. Ukubizwa njenge-prodrug, i-Adrafinil iqhutyelwa emzimbeni kwaye iguqulwa kwi-metabolite yayo, i-Modafinil.Adrafinil isetyenziswe ngabantu abanomdla, ukhathala emini. Abanye abaxhamlayo kule nkunkuma ngabantu abasebenza ngobusuku bobusuku, kunye nabantu abanomsebenzi wabo ofuna ukuba bahlale bephaphile ixesha elide ngaphandle kokulala.
Adrafinil powder ividiyo
I-Raw Adrafinil yepowder powder Characters
igama: Adrafinil powder
I-molecular Formula: C15H15NO3S
Isisindo somzimba: 289.35
I-Raw Adrafinil powder inokuphucula umsebenzi wengqondo kunye nomjikelezo owongeziweyo
Ukusetyenziswa kwe-Raw Adrafinil
I-Adrafinil powder iye yafumana udumo kwiminyaka yamuva ngenxa yokufana kwayo kwi-modafinil kunye nofikelelo olufikelelekayo.
I-Adrafinil powder iphathwa njenge-supplementary supplement eUnited States ukuze uyithenge ngaphandle kwemithi.
Ngokwakheko lweekhemikhali, i-Adrafinil ipayipi eluhlaza ifana ne-modafinil kunye nokongezwa kwe-OH (i-hydroxyl group) kwi-amide nitrogen, eyenza i-hydroxylamine.
I-Adrafinil powder eluhlaza ngumprodrug ye-modafinil. Oku kuthetha ukuba iguqulwa kwi-modafinil emzimbeni, eyona-arhente esebenzayo. Iqhekeza kuphela le-Adrafinil powder iguqulwa kwi-modafinil, kwaye intsalela ibhekiswe kwi-acids modafinilic acid.
I-Adrafinil powder iyanda ukwanda ngaphandle kwemininzi yeempembelelo ezingathandekiyo ezihambelanayo nezinye izidakamizwa zolu hlobo. Ukunciphisa ukukhathala ngelixa uhambisa isiphapheko kunye nesimo esilumkileyo kumsebenzisi.
Nangona kuncedo lwayo lwe-nootropi, i-Adrafinil powder yindawo ekhuselekile kwaye engeyona inetyhefu. Izifundo zifumene ukuba zivelise utyhefu ngisho nangamaxabiso angaphezu koko kunconywayo.
Imilinganiselo efanelekileyo ye-Adrafinil powder iphakathi kwe-600-1200mg. I-Adrafinil powder iyinxube yamanzi kwaye inokuthathwa ngamanzi okanye ijusi kwisisu esingenalutho. Kufuneka kuthathwe kusasa ukususela kule ntambama okanye kusihlwa kungabangela ubuthongo. Izigulane kufuneka zithathe i-Adrafinil i-powder eluhlaza ngobuncinane obukhulu ukuqala kunye, kwaye inganciphisa ngokunyuka ukuya kumazinga aphakanyisiweyo aphezulu.
I-Adrafinil powder kufuneka ithathwe ngamanye amaxesha. Ngokomzekelo, inokuthi ithathwe kwiintsuku apho kufikelelwe ixesha elidityanisiweyo okanye xa umsebenzi ufuna iiyure zokusebenza ezongezelelweyo ukuba zifakwe. Isicirho sinokuthi sithathwe ngesiseko. Ngokomzekelo, umntu unokuthatha le nkunkuma kwiiveki ezimbini aze athathe ikhefu iveki. Ngale ndlela, imiphumo emibi yeziyobisi ezinobindi ingancitshiswa.
Isilumkiso kwi-Raw Adrafinil powder
Ingamangqina ukuba i-Adrafinil powder ingaba yi-hepatotoxic (yenzakalisa isibindi). Ingcamango kukuba ekubeni ukuguqulwa kwe-Adrafinil powder eluhlaza ukuya kwi-modafinil kufuna i-enzyme yesibindi, ukuba i-Adrafinil powder igxininisa isibindi.
Akukacaci ukuba yi-CYP450 isoform (i-enzyme yesibindi) iguqula i-Adrafinil powder eluhlaza kwi-modafinilic acid kunye ne-modafinil. Kodwa akukho ubungqina obuqinileyo bokuthi i-Adrafinil powder iyonakalisa isibindi.
Ukusetyenziswa kwe-Adrafinil powder kuthathwa njengekhuselekile ngexesha elifutshane. Ngethuba lokusebenzisa ixesha elifutshane, isicatshulwa sithathwa njenge-agent promotion agent. Ikhuthaza amandla okuqonda kunye nokuqonda kubantu. Uphando lubonisa ukuba ukusetyenziswa kwesi sidakamizwa kunokuchaphazela imeko yokukhuthaza abantu.
Ukusetyenziswa kwe-Adrafinil powder oluhlaza akucetyiswa ixesha elide. Esikhundleni salo, isicatshulwa singathathwa kwiimjikelezo. Ukuba uthathelwa ixesha elide, umzimba unokuhlakulela ukunyamezela malunga neziyobisi, kwaye umphumo wayo awuyi kuvelelwa. Ekusebenziseni ixesha elide, lingenza abantu batshintshe iimpawu zabo zokuziphatha, njengabantu baseLocon babeba ncokola ngakumbi. I-Adrafinil powder isetyenziselwa ngokufanelekileyo ukunyangwa kwesifo se-Alzheimer eFransi
Ngomsebenzi we-Adrafinil powder yomsebenzi, i-Adrafinil powder isebenza kwinkqubo ye-adrenergic, inxalenye yesimiso senzwa esisusa i-adrenaline. Ngokuqhelekileyo edibene neempendulo zokulwa okanye "ukulwa," ukukhululwa ngokukhawuleza kwe-adrenaline kwandisa amandla kwaye kwandisa ukuphaphama. Nangona kungekhona zonke i-Adrafinil izenzo ezenziwe ngophuphu oluqingqiweyo ziqondwa ngokupheleleyo, kukholelwa ukuba ziphinda ziphendule imiphumo emihle yokukhululwa kwe-adrenaline ngokukhuthaza ama-neurotransmitter adrenergic.
Ngokomsebenzi, i-Adrafinil powder iyinqubo yokwenza i-prodrug okanye i-precursor, oku kuthetha ukuba okokuqala i-pharmacologically ayisebenzi kodwa iguqulelwe kwifomu esebenzayo ngaphakathi komzimba. I-Adrafinil ipayipi eluhlaza isetyenziswe kwisibindi, apho iguqulwa khona kwi-Modafinil, i-USFDA eyamkelwe unyango malunga neengxaki zokuphaphama ezithengiswa phantsi kwegama le-Alertec, i-Modavigil ne-Provigil. Impembelelo ye-pharmacological ye-Adrafinil powder ifana neyoModafinil.
Nangona iindlela ezichanekileyo ze-Adrafinil powder aluhlaza azicaci ngokupheleleyo, abaphandi bacinga ukuba kwi-form yayo ye-metabolized it is a adrenergic receptor agonist. Enye yezenzo zayo eziphambili kucingelwa ukuba yandisa imveliso kunye nokukhululwa kwe-hypocretin ye-neurotransmitter, leyo leyo ingabangela ukwanda kwe-dopamine, i-histamine kunye ne-norepinephrin. Zonke ezi zi-neurotransmitter kunye nama-hormone zihambelana ngokuthe ngqo kumanqanaba okuvuka kunye namandla, okucacisa ngokubanzi i-Adrafinil iipropati ezikhuphayo zepowder.
Impembelelo enamandla yokuphucula imizwa kunye nokuphucula ingcamango ye-Adrafinil powder iyakholelwa ukuba yenziwe ngamanyathelo athile, kubandakanywa ukulungelelanisa okulungileyo kwama-receptor ye-glutamate kunye nokuvimbela ukuphahlaka kwe-glutamate. Oku kungabangela ukukhulumisana kwe-neuronal, okuphucula imemori kunye nokugxila kunye nokwenza umsebenzi ogqithisileyo wengqondo jikelele.
I-Adrafinil powder eluhlaza ikholelwa kwakhona ukuba ivuselele ukukhululwa kwe-serotonin, eyenza ngcono isimo sengqondo ngokuncedisa ukunciphisa uxhalabo. Inokuthi ingavimbela ukuphazamiseka kwe-dopamine, i-neurotransmitter edlala indima enkulu kwimpumelelo yombilini kunye namaziko okuzonwabisa kunye neempendulo zemizwelo.
I-Raw Adrafinil yokuthengisa
IV. Indlela yokuthenga i-Adrafinil powder kwi-AASraw?
I-Smart Drug Adrafinil Powder: Yintoni Okulindele Ukuba Uyazi?
ngokutsha 1 ngenxa Adrafinil powder
I-Adrafinil powder iyinhlakanipho